Bogga ugu weyn / blog / Qoysaska Shiinaha, Runtii Miyaanay U Qalmin Kala-Bixinta Saddexaad?
2020 / 10 / 17 Qoondayntablog 977 0
Whenever I talk about Japan with my friends, I can’t get rid of one topic: musqulaha.
Si kastaba ha noqotee, maxaa iigu cajaa'ib badan musqulaha Japan ma aha naqshadeynta qosolka iyo nadaafadda ee lagu qoslo, laakiin sida musqulaha loo isticmaalo.
Jabaanku waxay jecel yihiin inay qubeystaan, marka si kasta oo ay u yartahay ama u yartahay musqusha, barkadda qubeyska waa mid caadi u ah guri kasta.
We have introduced the three separations before, and the reason why we are mentioning the three separations again today is because we found that there are a lot of people who don’t understand maxay kala yihiin seddex qaybood, waxayna kaliya raacaan isbadal dartiis seddex qaybood, iyadoo aan si taxaddar leh looga fiirsan inay tahay waxay u baahan yihiin iyo in kale.
So today we’re going to have a good chat about waa maxay sedex kala sooc, iyo hadii ay tahay iyo inkale sadax kala goyn waa lama huraan.
Waa Maxay Saddexda Qaybood?
Ugu horreyntii, waxaan u baahanahay inaan caddeynno fikradda saddexda kala-goyn, macnaheedu maaha inaan ku darno albaabka muraayadda ama daah qubeyska musqusha xitaa haddii ay kala maqan tahay.
The real three separations means that the washroom, toilet and shower partitions do not overlap each other’s space and can be used by three people at the same time. Si kale haddii loo dhigo, seddex kala soociddu waa seddex qol oo madaxbannaan, waxay wadaagi doonaan shaqada musqusha midba midka kale, oo ka madax bannaan midba midka kale faragelin la'aan.
Kala soocista labaad ayaa ah tan labaad ee ugu fiican, musqusha waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo madaxbanaan, laba qof ayaa isticmaala musqusha isla waqtigaas.
Marka loo barbardhigo musqusha isku dhafan, laba kala sooc iyo seddex kala soocid gaari kara kala soocida qoyan iyo qalalan, taas oo si weyn kor ugu qaadeysa raaxada isticmaalka musqusha.
Marka loo barbardhigo labada kala-goyn, qubayska saddexda qaybood gabi ahaanba waa madax-bannaan yahay, kala-soocidda qoyan iyo qalalan si loo gaaro wax ka sii dhammaystiran, isla mar ahaantaana si fiican uga caawin kara qoyska isticmaalka khilaafaadka iyo cadaadiska, si weyn u wanaajiya waxtarka isticmaalka musqusha.
Qiyaas qoys ka kooban saddex qof. Habeenkii, inta ay hooyadu qubeysaneyso, aabuhu wuxuu aadi karaa musqusha isla markaana carruurtu isla waqti isku maydhan karaan. Haddii dadku ka badan yahay, oo leh saddex fac oo isku qoys ah, faa'iidooyinka kala-soocidda saddex-geesoodka ah ayaa aad u muuqda.
Taasi ma tahay Faa'iidada Keliya ee Kala-Bixinta Saddexda Jiil?
Qodobka ugu muhiimsan ayaa ah that it’s not just a need for all Chinese families.
Ka dib oo dhan, waxa ugu caansan ee aan haysan jirnay wuxuu ahaa hal-gabal
Sidaa darteed, aragtideena ku wajahan seddex qaybood waa inay ahaataa looma tixgelin karo xagga aragtida nafsaaniga ah, laakiin waxaa loo tixgelin karaa mid wax ku ool ah.
Guri runtii ubaahan seddex kala-goyn, marka hore dadka degan guriga waa inay ahaadaan ugu yaraan 3 ama ka badan, haddii kale looma baahna.
Marka labaad, gurigu wuxuu leeyahay oo kaliya hal musqul. Haddii qoysku leeyahay laba musqulood, illaa inta labadoodaba ay laba kala gaarayaan, sidoo kale waxay horeyba u la kulmi karaan isticmaalka maalinlaha ah.
Waxa ugu dambeeya ee laga fiirsadaa ayaa ah xubnaha qoyska waxaa loo bartay inay qubeystaan. Qubeysku wuxuu qaadan doonaa waqti ka dheer inta lagu maydho, barkadda qubeyskuna waxay ku taal meel bannaan oo qof keliya isticmaali karo. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in loo kala saaro barkadda qubeyska ee qoys ballaadhan si ay ugu qaataan qubeys xilli firaaqo ah, waana sababta ay dadka reer Japan u jecel yihiin inay qubeystaan.
Marka lagu daro xaqiiqda ah in wax ku oolku ka duwan yahay qoys kale, waxaa jira dhibaato kale oo qoysaska Shiinaha: way adag tahay in la garto saddexda kala soocid.
Sababta ayaa ah in cabirka iyo qaabka guriga uu yahay mid aad u baahan.
Si loo gaaro saddexda qaybood, musqusha waa inaanay aad u yaraanin, oo shuruudaha tirada reerku way ka sii sarreeyaan.
Qaababka guud ee musqulaha waa: xariijin toosan, xariijin jiifsan iyo laba jibbaaran.
Kaliya musqusha jiifka dheer waa midka ugu macquulsan ee lagu gaari karo saddexda kala-goyn, booska ayaa sida ugu fiican loo qaybiyaa, kaliya ku dar xijaab waxay noqon kartaa.
The square musqusha, dhinaca kale, waxay u baahan tahay aag ugu yaraan 4.6 mitir laba jibbaaran, according to Ms. Walkie’s estimate.
Xigasho: konteenarka guryaha dadweynaha
Haddii aad rabto inaad si raaxo leh ugu isticmaasho, aagga waa inuu ahaadaa ilaa 6 mitir murabac.
Qaabka kala-sooca saddex-geesoodka ah ee laba jibbaaran
As for the slim toilet …… is unlikely to be able to achieve this, because to get to the innermost shower area, one would have to pass through the toilet (khadka firfircoonida waa inuu ahaadaa ③ → ② → ①). Haddii tan lagu guuleysan lahaa, darbigu wuxuu u baahnaan lahaa in laga baxo.
Saddex-Kala-Bixin Ama Laba-Kala-Bixin
Waxa cad ayaa ah in hal gabal ay tahay waajib, sidaa darteed doorashada aan wajahayno ayaa ah in la helo saddex qaybood ama laba qaybood.
Hadda qaabka saddexda kala-goys ee musqusha runti aad buu u kulul yahay, aniga qudhayduna waxaan u ololeeyaa saddexda kala-tag, maxaa yeelay raaxada iyo waxtarka isticmaalka labaduba waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda muuqda.
Laakiin liinta waxay ku dhashaa Huainan waa oranjo, waxay ku dhashaa Huabei waa Hovenia, aakhirka inay seddex kala baxdo, ama in la arko haddii aysan aakhirka ahaan karin sida ay tahay xaaladaha maxalliga ah, iyo in runti la hagaajiyo farxadda meertadooda nololeed.
Tusaale ahaan, dhawaan, saaxiibkiis oo ku mashquulsan qurxinta wuxuu helay laba sawir oo naqshadaysan, naqshadaynta musqusha ayaa dhab ahaan laba kala ah iyo saddex kala duwan siday u kala horreeyaan.
Qorshaha naqshadeynta saddex-kala-goynta ah
Qaab-dhismeedka saddexda kala-saar ayaa ku yaal dhinaca laba jibbaaran, laakiin musqusha asalka ah ayaa hoos loo dhigay, markaa waa inaad wax yar ka amaahato qolka ku dhow.
Nidaamka naqshadeynta laba-kala-goyn ah
Naqshadeynta laba-gaar ah ayaa ah qaabka ugu caansan, iyadoo saxanka kaligiis u baxayo. Labada naqshadood gabi ahaanba ma fiicna mana xuma, oo labaduba waa ku habboon yihiin xagga ka-faa'iideysiga booska.
Kala qeybsanaanta seddex-geesoodka ah waxay leedahay faa iidooyin u gaar ah waxayna ka sahlan tahay labada dhinac ee loo qaybiyo qoys ballaaran. Si kastaba ha noqotee, kala tagga labaad wuxuu u baahan yahay meel yar oo aad ugu habboon qoysaska yaryar.
Xulashada u dhaxeysa seddex kala sooc ama labo kala saarid waa inay ku saleysnaataa baahiyahaaga gaarka ah, halkii aad ka daba geli lahayd waxa loogu yeero fad.
Saaxiib wax ku bartay Japan ayaa kiraystay guri 38-mitir laba jibbaaran ah oo keligeed ah, oo leh suuli dheer oo jiifa oo saddex kala ah, saxan dhexda ku yaal, qubeys + barkadda qubeyska dhinaca bidix, iyo musqul dhanka midig ah.
Maaddaama dhammaan saddexda aag ay aad u camiran yihiin, waxay inta badan albaabka suuliga u furtaa oo ku xirtaa saxanka, taas oo u beddeleysa qayb labaad.
Si kastaba ha noqotee, mid kale oo qaraabo ah oo dhowaan u soo guurtay guri cusub, qoys ahaan shan qof, ayaa u tilmaamtay naqshadeeyaha kahor cusbooneysiinta inay u baahan tahay musqusha saddexda ah.
Si kastaba ha noqotee, aagga suuliga asalka ahaa wuxuu ahaa 4 mitir oo laba jibbaaran, sidaa darteed waxaan ka amaahday 2 mitir oo laba jibbaaran qolka jiifka ee ku dhow si aan u ballaariyo aagga suuliga.
Labadan tusaale, waa inay ku tusto jawaabta saxda ama khaldan ee doorashada seddex qaybood ama laba qaybood ayaa adiga kaliya lagu yaqaan.
Ixtiraamka sawirka ee pinterest
Hore:: Talooyinka Musqusha ee ugu Fiican Abid, Dhamaan Meel Kaliya!
Kohler Ayaa Maxkamad U Qaaday Shirkad Caan Ah Oo Caan Ah Oo Smart Ah In Ka Badan $ 1.4 ...
Caqli, Xiriir Laheyn, Iskutallaabku Wuxuu Ku Socdaa Guud Ahaan! Noocyada cusub ee Aaladda Dibadda Musqusha Ex ...